Bogga ugu weyn Sida Loo Sameeyo Kadhka Debit
Kaadhadhka lacag-bixinta waa sahlan yihiin in lagu shaqeeyo, gaar ahaan lacag diris ah. Daraasadaha qaarkood waxay muujinayaan in marka macaamiishu isticmaalaan kaadhadhka bangiga halkii ay ka isticmaali lahaayeen jeegaga waraaqaha, ay ku bixiyaan 20% ilaa 30% dheeraad ah.
Caadi ahaan, wax-ka-soo-saarku wuxuu yimaadaa marka aad kharash garayso lacag ka badan inta aad akoonkaaga ku jirto oo bangigaagu uu daboolo faraqa u dhexeeya.
Mararka qaarkood, dadka waxaa lagu qasbaa inay u jeestaan ​​tallaabooyin xad dhaaf ah, sida codsi amaahda shakhsiga ah marka ay "dhakhso ugu baahan yihiin lacag caddaan ah," halka qaar kalena ay la tashadaan urur ka cafinta deynta si ay u bartaan sida looga baxo deynta culus.
Waxa jiray horumarro sharciyeed oo laga yaabo in laga nasiyo wareegga xun ee khidmadaha dheeraadka ah, baaqyada taban, iyo lacag-bixinta aan la bixin.
Maqaalkan, waxaan ku tusi doonaa siyaabo kala duwan oo aad kaga xad dhaafi karto kaadhka deynta. Si taxadar leh u akhri.
Wax ku saabsan Adeegga Lacag-dhaafka ah ee Kaadhka Debit
Adeegga Debit Card Overdraft Service waa adeeg kuu ogolaanaya inaad lacag amaahato adigoo isticmaalaya kaarka deynta.
Si ay tani ugu hirgasho akoonkaaga, waa inaad doorataa Adeegga Debit Card Overdraft Service.
Marka aadan haysan hadhaaga kugu filan oo aad ku daboosho wax kala iibsiga kaadhka deynta ama lacag bixinta ATM-ka, waxaad isticmaali kartaa adeegan.
Haddi aanu yeelno, akoonkaaga waxa ay noqon doontaa mid xad dhaaf ah, waxaana lagu dabaqi doonaa kharash dheeraad ah.
Haddi ay taasi dhacdo, waa inaad sida ugu dhakhsaha badan ugu shubtaa lacagta akoonkaaga si aad u soo celiso hadhaaga togan ee akoontiga.
Xitaa haddii aad doorato inaad isticmaasho adeegga, waxaan xaq u leenahay inaan diidno in aan maalgelinno wax kala iibsigaada oo aan ka badino akoonkaaga. Wax kala iibsigaaga mar uun baa la diiday
Haddii aadan iska diiwaan gelin Adeegga Debit Card Overdraft Service oo aadan haysan lacag kugu filan, ka bixista ATM-kaaga iyo kaarka deynta caadiga ah waa la diidi doonaa.
Haddi aanad akoonkaaga ku haynin hadhaaga la heli karo oo kugu filan, waxa laga yaaba inaad rabto inaad iska baxdo si aad iskaga ilaaliso inaad bixiso ganaaxyada dheeraadka ah adiga oo ATM-kaaga ama kaadhkaaga debit-ka la diiday.
Haddii kale, waxaad dooran kartaa Adeegga Debit Card Overdraft Service oo aad diyaar u tahay inaad bixiso khidmad dheeraad ah oo aad ku beddesho awoodda adeegga kaa caawinaysa inaad iska ilaaliso wax kala beddelashada dukaanka ama ATM, go'aankeenna.
Akhri Sidoo kale: Sidee U Shaqeeyaan Kaadhadhka Lacag-bixinta ee Hore loo Bixiyay?
Maxay ka dhigan tahay in lagu xad dhaafi karo kaarka deynta?
Waxay la macno tahay inaad isticmaalayso kaarka deynta si aad wax u iibsato inkasta oo aanad lacag kugu filan ku haysan akoonkaaga hubinta.
XIDHIIDHKA: Halkee laga Iibsan karaa Kaararka Hadiyada Qarsoodiga ah ee Victoria 2022
Haddii aad doorato inaad isticmaasho ilaalinta xad-dhaafka ah ee bangigaaga, wax kala beddelashadu waa soconaysaa laakiin waxaa lagugu soo dalacayaa kharash dheeraad ah - guud ahaan $35.
Suurtagal ma tahay in ATM-ka lagu iibsado kaarka deynta?
Haa, si kooban loo dhigo. Si kastaba ha ahaatee, waa inaad hubisaa inaad dooratay doorashadaas bangigaaga. Way ka raqiisan tahay in ATM-ka lagu dhaafo halkii aad marar badan isticmaali lahayd kaarka deynta.
Sababtoo ah wax kala iibsi kastaa waa $35, waxaa la door bidayaa in lagala noqdo $100 oo aad bixiso $35 khidmadaha halkii aad kaarkaga u isticmaali lahayd wax-iibsiyo yar-yar oo kugu kici doona wax ka badan $100 oo kharash ah.
Suurtagal ma tahay in laga noqdo akoon taban?
Haa, hubaal waad awoodaa! Haddii aad iska diiwaan geliso ilaalinta xad dhaafka ah bangigaaga, waxaa laguu oggolaan doonaa inaad lacag kala baxdo akoon taban oo aad iska ilaaliso ceebta ah in kaadhka deynta lagugu diido dukaanka.
Markaad runtii u baahan tahay inaad wax iibsato ka hor jeeggaaga xiga, ka noqoshada akoonnada taban waxay ku caawin kartaa.
Waa inaad isticmaashaa adeegyo ilaalin kale haddii aad isku aragto xaalad aad si firfircoon u rabto inaad wax ka beddesho.
Akhri Sidoo kale: 20 ka Kaadhka Debit ee ugu Fiican ee Carruurtu u Noqdaan Lacag Savvy
Maxay dadku xisaabtooda uga bataan?
Iibsiyada lama dabagalo
Lacagaha la qorsheeyay goor hore ayaa laga jaray
Lacag bixinta tooska ah ee akoonkaaga bangiga ayaa loo dejin karaa xubinimada jimicsiga, kharashyada caymiska, iyo xataa kharashyada caafimaadka.
Inta badan, waxaad dooran kartaa taariikhda ka noqoshada. Mid kasta oo ka mid ah lacagahan, si kastaba ha ahaatee, waxaa la dalban karaa ilaa afar maalmood ka hor!
Haddii aad ku xisaabtamaysay badhtamaha maalinta lacag-bixintaada oo fasaxi soo dhawaado, lacagahaas qabyada ah waxa laga baaraandegayaa KA HOR intaysan imaan jeegaga mushaharka. Dabcan, tani waxay keeni kartaa in koontada lagaa dhaafo.
Cusbooneysiinta Dib u Dhacday
Waxaa laga yaabaa inaad rumaysato in wax kala beddelasho kasta oo lagu sameeyo kaarka deynta lagugu soo galo akoonkaaga.
Waxay u muuqataa inay ku taal saldhiga shidaalka! Si kastaba ha ahaatee, xaqiiqda nasiib darada ah ayaa ah in iibsiyo badan ay qaataan ilaa 24 saacadood si ay u muuqdaan.
Tani waxaa laga yaabaa inaysan dhibaato ahayn haddii aad la socoto dhammaan kharashaadkaaga, laakiin haddii aad ku tiirsan tahay kaydinta bangiga, waxaa laga yaabaa inaad dhibaato weyn gasho.
Ogolaanshaha wax-ka-bedelka vs. Diidmada wax-ka-beddelka
Oggolaanshaha wax-soo-saarka dheeraadka ah waxay noqon doontaa ikhtiyaar uu bixiyo bangigaagu. Ilaalinta wax-ka-bedelku waxay leedahay faa'iidooyin iyo faa'iidooyin labadaba:
Qabyada xad dhaafka ah waa la ogolyahay.
Waxa lagugu soo dalacayaa $35 khidmad xad dhaaf ah wax kala iibsi kasta.
Hadhaaga akoonkaaga hubinta waxa laga yaabaa inuu xumaado.
Lagaagama baahna inaad bixiso lacag jeeg ah oo la soo celiyay tafaariiqlayaasha.
Uma baahnid inaad ku bixiso khidmadaha daahitaanka qaansheegyada aad hore u bixisay maadaama bangigu dabooli doono.
XIDHIIDHKA: Bartilmaameedku ma iibiyaa kaadhadhka hadiyadaha ee Amazon? Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato
Lama oggola wax-ka-bedelka
Lacagaha jeegaga la soo celiyay ayaa is urursanaya.
Haddii jeeggaga la soo celiyo, waa inaad lacag ku bixiso.
Diiwaanka ama bamka gaaska, kaarka deynta waa la diidi doonaa.
Ganaaxyada soo daaha ayaa inta badan lagu dabaqaa xisaabaadka jeeg bixinta lagu soo celiyay.
Tafaariiqlayaasha ayaa laga yaabaa inay diidaan inay aqbalaan jeegagaga.
Ku Saabsan Ujeeddo Dheeraad ah
Ereyga "overdraft" waxa uu leeyahay macno taban, qofna ma rabo in uu si ula kac ah u jabiyo xisaabaadkooda.
Oggolaanshaha wax-ka-beddelka, dhanka kale,, waxay hubisaa in lacagahaaga la daboolay. Oggolaanshaha wax-ka-beddelka xad-dhaafka ah waxay ku caawin kartaa haddii aanad u nugulayn kharashyada xad-dhaafka ah.
Sidoo kale, oggolaanshaha dheeraadka ah waxay burburin kartaa dhaqaalahaaga haddii aad ku nooshahay jeeg mushaaraad ah. Aad bay qaali u tahay in la bixiyo khidmad kasta.
Apps iyo Kaydinta
Xitaa waxaad ka xad dhaafi kartaa koontada kaydka ah ee ku xiran akoonkaaga hubinta ee xarumaha badankooda.
Haddii ay kugu jirto hadhaaga taban ee akoonkaaga hubinta, bangigu wuxuu si toos ah ugala wareegayaa lacagahaaga koontada kaydka.
Bangiyo badan ayaa ku bixiya adeegan bilaash. Kuwa kale waxay qaadaan kharash adeeg. Haddii kale, waxaad soo dejisan kartaa mid ka mid ah barnaamijyada badan ee bilaashka ah ee kuu oggolaanaya inaad adigu sameyso wareejinta.
Akhri Sidoo kale: Kaarka deynta Vs. Kaarka Debit: Farqiga, Waxyaalaha Ay Ka Mid Yihiin, Iyo Sida Ay U Shaqeeyaan
Sida Loo Isticmaalo Kaarka Debit-ka si aad u dhaafto
Si aad u isticmaashid kaadhka deynta si aad u dhaafto, raac tillaabooyinka hoose:
1. Iibka si sax ah looma dabagalin
Markay timaaddo miisaaniyad-samaynta, jeegaggii hore ee waraaqaha ayaa lahaa hal faa'iido: waxay ka tageen raad waraaqeed.
Xitaa haddii aadan wakhti ku qaadan inaad buuxiso, waxaad la socon kartaa wax iibsigaaga adiga oo tirinaya jeegaga jeegaga.
Jeegaga koobiga kaarboonku waxa ay awood kuu siinaysaa inaad xisaabiso kharashaadkaga gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, kaarka deynta, si kastaba ha ahaatee, waxa kaliya ee aad u baahan tahay si aad u xaqiijiso in aad lacag ku bixisay waa rasiidh, taas oo si sahlan loo dhigo.
Dadka qaarkiis waxay la socdaan wax-iibsashadooda kaarka deynta ee diiwaanka jeegga waxayna xisaabiyaan qaddarkooda wax kala iibsi kasta ka dib.
Dhab ahaantii, wax la mid ah tan ayaa ku saabsan habka kaliya ee lagu hubinayo inaadan ku bixin lacag ka badan inta aad bangiga ku haysato.
Xitaa haddii aad qorto jeeg warqad ah, hadda si elektaroonik ah ayaa looga shaqeeyay waxaana laga jarayaa akoonkaaga goobta iibka.
Ma haysatid wakhti aad ku daboosho jeegga 2-3 maalmood ee soo socda. Natiijo ahaan, la soco wax iibsigaaga.
2. Ujrooyinka soo noqnoqda waxa la bixin karaa goor hore
Waxa loo malaynayaa inaad ku heshiisay bixiyeyaashaada taariikhda lacag bixinta, sida 15-ka ama 30-ka, haddii aad awood u yeelato caymiska caafimaadka ama bixinta amaahda guryaha si toos ah looga jarayo akoonkaaga bangiga bil kasta.
Fasaxyada, maalmaha fasaxa ah, iyo dhibaatooyinka farsamo dhamaantood waxay keeni karaan in lacagahan hore loo bixiyo, lacagtana waxa la qaadan karaa ilaa afar maalmood ka hor taariikhda la qorsheeyay.
Wax kala beddelashadani waxa ay sababi kartaa in hawlaha kaadhka debit-ka ee mustaqbalka ay ka xad-dhaafaan akoonkaaga haddii aanad diyaar u ahayn lacag caddaan ah oo kugu filan.
3. Oggolaanshaha shaqada waxa laga yaabaa inay ka badan tahay ama ka yaraato waxa lagu leeyahay.
Markaad buuxiso baabuurkaaga ama aad hubiso hudheel, lacag gaar ah ayaa laga jarayaa akoonkaaga si loo xaqiijiyo lacag bixinta mustaqbalka.
Inta aad sugayso kharashka dhabta ah si aad u nadiifiso, lacagtan la haysto waxay noqon kartaa ka weyn ama ka yar inta dhabta ah ee lagugu leeyahay, taas oo adkeynaysa in la qorsheeyo wax iibsiga.
Haddii aadan hubin inta lacag ee lagu hayo, weyddii isla markaaba aad siiso macluumaadka kaarka deynta dukaanka.
Waa inay awoodaan inay kuu sheegaan inta ay le'eg tahay kharashka la sugayo si aad si fiican ugu maareyso dhaqaalahaaga haray.
4. Macaamilada waxaa la cusboonaysiin karaa hal mar 24 saac ama ka yar.
In kasta oo bangiyada intooda badani ay doonayaan in ay helaan qalab warbixineed oo casri ah, qaar ayaa weli ku xayiran waagii dhagaxa, iyaga oo cusboonaysiinaya baaqigaaga internetka hal mar 24-kii saacba.
Haddii aad ku tiirsan tahay dhaqdhaqaaqa wax kala iibsiga si aad u ogaato inta lacag ah ee aad ka tagtay inaad isticmaasho, waxay kaliya adkeyn doontaa dadaalkaaga inaad iska ilaaliso inaad xad dhaaf ah.
La soco dhammaan deymaha marka ay dhacaan oo ku tiirsan xisaabaadkaaga, ha ku tiirsanayn bangiga, si aad u hubiso inaad haysato lacag kugu filan oo aad ku daboosho dhammaan wax kala iibsiga.
Kaarka Debit Venmo: Dulmar, iyo Sida ay u shaqeyso
Maxaa Fasaxyada Lagu Siiyaa Lacag Dhan Iyo Nus
CVS ma iibiyaan kaadhadhka hadiyadaha? | Liiska Kaararka Hadiyada ee lagu iibiyo CVS
Ma waxaad raadineysaa inaad sameyso cunto degdeg ah? Makhaayadaha heerka sare ah? Mise cunto caadi ah? Uma baahnid inaad fogaato. Costco waa…
PayPal waa nidaam lacag-bixineed oo sugan oo online ah kaas oo kuu ogolaanaya inaad wax ku bixiso alaabta, iyo kaadhadhka hadyada onlaynka…
Reviews Caymiska Safarrada 2022 | Ma xalaal baa mise waa khiyaamo | Sida ay u shaqeyso